वाइफाइ कमजोर छ ? अपनाउनुस् यी तरिका – yuwa Awaj
जेठ ३०, २०७८ आइतबार 102
घरमा वाइफाइको सिग्नल कमजोर भएका दिक्क हुनु भएको छ ? शोधकताहरुले वाइफाइ राउटरको एन्टिनाको चारैतर्फ आल्मुनियम फोइल लगाउनाले वाइफाइ तरंग मजबुत हुने तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।
केही यस्ता तरिका छन् जस्ले तपाईको वाइफाइ सिग्नललाई मजबुत बनाउन सक्छ । -वाईफाईको राउटर कुन स्थानमा छ त्यसले स्पीडमा असर पर्दछ । यदि तपाईँले राउटरलाई भुईँमा राख्नुभएको छ भने त्यसको वाईफाई सिग्नल तपाईँको डिभाइसमा पुग्न सक्दैन् । त्यसैले वाईफाई राउटरलाई सकेसम्म अग्लो स्थानमा राख्ने
-हरेक वाईफाई राउटरमा क्षमताको निश्चित सीमा तोकिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै राउटरले ५०० मीटरसम्मको एरिया कभरेज गर्छ भने कुनैले २० मीटरसम्मको मात्रै । त्यसैले तपाईँको वाईफाई राउटरले कति दूरीसम्म सिग्नल दिन्छ भन्ने जानकारी राख्ने।
-वाईफाई राउटरको अवस्था र राखेको स्थान ठिक भएपनि कहिलेकाँही त्यसमा अवरोध हुन्छ । वाईफाई सिग्नलको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको कंक्रीट र मेटल हो । वाईफाईको वरिपरि सकेसम्म मेटलका सामग्रीहरु नराख्ने ।
-वाईफाई राउटरले ३६० डिग्री एंगल एरिया कभर गर्दछ । यसले सबै दिशामा एकै प्रकारले सिग्नल पठाउने गर्दछ ।त्यसैले जुन दिशामा वा स्थानमा बसे पनि केहि फरक पर्दैन तर तपाईँको वाईफाई राउटरको स्थान र प्रयोग गर्ने डिभाइस कुन स्थानमा छ त्यसको बिचमा कुनै अवरोधहरु त छैनन भन्ने हेर्ने ।
Prevलघुकथा : धन र मन
Nextदैनिक एउटा अमला खानुस्, मु’टुको स’मस्या र क्या’न्सरबाट जोगिनुस्
उज्यालोका नायक कुलमान घिसिङको आज जन्म दिन बिहानै देखि शुभकामनाको ओहिरो…हेर्नुहोस् ।
इटालीका गोलरक्षक डोनारुम्मा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी
बिरामीको सेवामा कोरोना अस्पतालका नर्स, भाइटीकाका दिन पनि बिहानैदेखि ड्युटीमा खटिए !